ကိုရီးယားအဆငျ့မွငျ့ ခွကေနျတိုကျနညျးပညာ (ဦးပွညျသိမျး) - Thaing Wizard
This entry was posted in Hwa Rang Do, Martial Arts, Martial Arts Book and tagged စာအုပျ, ဟှရနျဒို, ဦးပွညျသိမျး by athtet. Bookmark the permalink.
5 thoughts on “ကိုရီးယားအဆငျ့မွငျ့ ခွကေနျတိုကျနညျးပညာ (ဦးပွညျသိမျး)”
ဟုတ်… သိုင်းနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ စာအုပ်တွေက ဒီဘက်ခေတ်မှာ ရှားသွားပြီဗျ… စာအုပ်တွေက အသစ်လည်း မထွက်ဘူး။ အဟောင်းတွေလည်း ပြန်မထုတ်နိုင်ကြတော့ဘူး။ အဲ့တော့ သိုင်းစာအုပ်လိုချင်ရင်တော့ စာအုပ်အဟောင်းတန်းတွေမှာသာ ရှာပါဗျာ… http://thaingwizard.wordpress.com/martial-arts/myanmar/ မှာ list ထုတ်ထားတဲ့ စာအုပ်တွေကိုတော့ ကျွန်တော် တဖြည်ဖြည်းနဲ့ scan ဖတ်ပြီး တင်ပေးသွားပါ့မယ်။ အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါဗျာ…